Archive du 20170206
Raharaha 7 febroary Teti-dratsy voaomana
Feno 8 taona katroka rahampitso talata ny raharaha 7 febroary nisian�ny fananihan-dapa ka nisian�ny ra mandriaka sy ny faty olona niseho teny Ambohitsorohitra.
Sareraka � Mpandroba no misy eto �
Mampiteny ny moana ny zava-misy ankehitriny eto Madagasikara. Niala tamin�ny fahanginany hatramin-dRandriazanakolona Yvon na Sareraka,
Vahoakan�i Miandrivazo Miandrandra an�i Dada eo amin�ny fitondrana
Tafahaona ny tia sy ny manina tany Miandrivazo ny sabotsy teo. Nidina tany an-toerana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ka hafaliana tsy omby tratra ny an�ireo vahoaka maro be nandritra ny fitsidihana nataony.
TIM Alasora Vonona amin�ny fifidianana rehetra ho avy
Vonona ny hiatrika ny fifidianana rehetra ho avy amin�ny taona 2018, indrindra ny hamerenana amin�ny toerany ny filoha Marc Ravalomanana hitantana sy hanarina indray ity firenana tena latsaka an-davaka ity ny antoko TIM eny Alasora, hoy ny filohan�ny COMTIM vaovao eny an-toerana,
Sefom-pokontany - Faritra Menabe 13 volana tsy nahazo ny tambin-karama
Manompo vahoaka hatrany izahay na dia tsy nahazo ny tambinkan-rama tao anatin�ny iray taona (2016) mahery iray volana 2017 aza. Io no nambaran�ireo sefom-pokontany ao amin�ny Faritra Menabe raha nihaona tamin�ny mpanao gazety tao Morondava.
Fitakiana ny Nosy Malagasy Vonona hifanampy ireo Mpanjaka
Nihaona tamin�ny Mpanjaka Ndrenogny Ramahasitrakarivo Martin G�rard mivady sy ireo mpiara-miasa aminy, tao amin�ny Tranobe Evato Vohipeno ny delegasiona avy amin�ny � Vovonana Mampiaray �
James Ratsimba Taom-panafahana ho an�ny Malagasy ny 2017
Olana fototra eto amin�ny firenena ny mbola fiankinan-dohantsika eo amin�ny lafiny angovo, hoy ny profesora Ratsima James.
AV 7 Iray tsy mivaky
Iray tsy mivaky ny AV7 (Association des Victime du 7 f�vrier 2009) ary tsy hisy mandrakizay ny AV7 B. Io no nambaran�i Tsimirehadava, anisan�ireo mpikambana raha nitafa tamin�ny mpanao gazety izy ireo ny sabotsy 4 febroary teo.
Miarahaba an�i Jean indray amin�izao fiantombohan�ny herinandro izao. Tena ketraka aho ry Jean a, marina e ! Tena velom-panontaniana amin�ny Mpahary mihitsy aho hoe : fa dia nahoana loatra ary no ianareo no nomeny hitondra anay ?
Loza tany Anjozorobe Hanao fisaonana ny mponina
Nikipian�ny fitondrana Rajaonarimampianina tanteraka ny resaka fisaonam-pirenena manoloana ny faty olona marobe vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany Anjozorobe ny sabotsy 28 janoary 2017 teo.
Ampitatafika Atsimondrano Hampiasa Cyclo-pousse sy Bajaj
Hampidirina hanampy ny fitaterana ireo mponina eny anivon�ny fokontany ao anatin�ny kaominina Ampitatafika,
Sekoly tsy ara-dal�na Voatery hamerim-bola
158 amin�izao fotoana izao ireo sekoly tsy miankina amin�ny fanjakana tsy manana fahazoan-dalana hisokatra, raha ny fitsirihana nataon�ny avy eo anivon�ny ONEP na ny Ofisim-pirenena misahana ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara farany.
Akanin-dry Masera ao Amparafaravola Mamolavola ankizy vavy hiatrika fiainana
Ireo solafaka teo amin�ny fiainana sy ny zanaky ny sahirana ara-pivelomana no raisin-dry Masera ao amin�ilay Akany ka omena fampiofanana toy ny zaitra.
Aretina homamiadana Misy tranga vaovao 14 tapitrisa mahery isan-taona
Maherin�ny 14 tapitrisa isan-taona ny trangana homamiadana vaovao maneran-tany, raha ny tarehimarika farany navoakan�ny sampandraharahan�ny Firenena Mikambana misahana ny fahasalamana.